Hery ara-teknika - Ningbo Yaxiang Cleaning Products Co., Ltd.
Squeeze Mop Siny
Kit famafazana gorodona
Mino ny fananganana fifandraisana maharitra amin'ny mpanjifa izahay ary mirehareha amin'ny fiaraha-miasa amin'ny mpanjifanay.
Ny tanjonay dia ny hanome tolotra tsara indrindra, haingana ary azo antoka indrindra.
manome traikefa voalohany amin'ny laharana voalohany ho an'ny mpanjifanay.nandany fotoana niasa tamin'ny andraikitra isan-karazany mifandraika amin'ny serivisy izahay ary faly foana manampy ny mpanjifanay.
manome sy mitazona traikefa matihanina sy mahafinaritra ho an'ny mpanjifanay izahay.
Fandraisana anjara feno, fanamafisana ny fitantanana, fanatsarana ny kalitao sy ny kalitaon'ny fanariana.
Fonosana & Fitaterana
Ny orinasa dia manome lanja lehibe ny fonosana vokatra.Hofenoinay misaraka ny modely tsirairay, asio marika mazava tsara ny fonosana, ary apetaho eo ivelan'ny tsipika famokarana.Ny fonosana tsirairay dia ho vita amin'ny fiarovana tsara sy ny lanjany marina.
Fitaovana & fitaovana
Ny orinasa dia mampiditra R&D, famokarana ary fivarotana tariby vy Stainless.Hatramin'ny nanorenana, dia nanolo-tena ho amin'ny fitarihana sy fanavaozana ny vokatra sy ny teknolojia, ary indrindra fa hentitra amin'ny kalitaon'ny vokatra ary nifantoka be tamin'ny fahafaham-pon'ny mpanjifa.Noho izany dia nohatsaraina amin'ny lafiny rehetra.
Raha mila fanontaniana momba ny vokatra na ny lisitry ny vidiny, azafady avelao ny emall anao ary hifandray izahay ao anatin'ny 24 ora